सिन्धुपाल्चोकमा फेरि राणाको अग्रता, कसको कति मत ?
सिन्धुपाल्चोक २१ मंसिर– सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ मा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका पशुपति शमशेर राणाले फेरि अग्रता लिएका छन् । शुरुवाती अग्रता लिएका राणा कहिले अघि कहिले पछि पर्दै आएका थिए । राणाले २ हजार ८५५ मत प्राप्त गरेका छन भने नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङले २ हजार ७ सय १८ मत प्राप्त गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका अग्नी सापकोटा कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत भन्दा धेरै अगाडी छन् ।
मंसिर २२, २०७४ मा प्रकाशित
कमल थापा साढे ५ सय मतअन्तरले पछाडि, कसको कति मत ?
थ्रेसहोल्ड नकटाउने मत के हुन्छ ? काठमाडौँ, २६ मङ्सिर- समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले सिट नपाउने खबर गोरखापत्रमा छ । र, यस्ता दलहरूले पाएको मत एक हिसाबले खेर नै जान्छ । निर्वाचन आयोगको संस्थागत...
यसरी छानिन्छन् समानुपातिक सांसद
जसले पूरा गरे जितमा ‘ह्याट्रिक’
भारतीय काँग्रेस पार्टी हाँक्ने जिम्मा राहुल गान्धीलाई
भगवती र गच्छदारबीच धाँधलीको घोचपेच चल्यो, रोकियो मतगणना
प्रतिनिधिसभाको १०९ क्षेत्रमा वाम गठबन्धन विजयी(सूचीसहित)